Teknụzụ dị n'azụ bitcoin na-enye ohere ka azụmahịa rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ntụkwasị obi, na-enweghị mkpa maka onye nnọchi anya ya. Teknụzụ ndị a ahapụla ịbụ ndị a na-eleghara anya ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ nke nnukwu ụlọ akụ. Ndị ọkachamara na-eme atụmatụ na iji teknụzụ blockcheni nwere ike ịpụta ịchekwa ihe ruru nde dọla iri abụọ maka mpaghara a ka ọ na-erule 20,000. somefọdụ na-aga n’ihu ma na-atụ ụjọ iji atụpụta ihe a na nke igwe ọkụ ma ọ bụ injin na-ere ọkụ.
Kedu ihe iji usoro abụọ kachasị ewu ewu n'ụwa nwere ike inye ụmụ mmadụ? Anyị na-ekwu maka ngọngọ na Intanet nke ihe (IoT). Teknụzụ abụọ nwere ikike dị ukwuu na njikọta ha kwere nkwa nke ukwuu.
Kedụ ka IoT si agbanwe?
Na mbu, teknụzụ abụọ a enweghị obere ihe jikọrọ. Mana n'ọhịa nke teknụzụ dị elu, ọ dịghị ihe agaghị ekwe omume. Enwere otutu ochicho, ndi nwere ọgụgụ isi na ngalaba na-eto ngwa ngwa ndị dị njikere ịrụ ọrụ oge na elekere iji chọta ihe ngwọta na-adọrọ mmasị na nkwụsị nke ọhụụ abụọ.
Ihe mbụ na-abata n'uche bụ nchekwa. Ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ kwenyere na ngọngọ nwere ike ịkwado nchekwa ngwaọrụ IoT site na isonyere ha na gburugburu ebe obibi.
IBM nwere mmasị n'oge na-adịbeghị anya n'iji ngọngọ maka Intanet nke ihe. Ikpokọta teknụzụ ga-enye gị ohere ịtụkwasị obi ma dekọba akụkọ mgbanwe nke ihe ntanetị ntanetị n'otu n'otu na otu ha, na -emepụta ụzọ nyocha na-enye gị ohere ịkọwapụta usoro nke smart contracts.
Teknụzụ ngọngọ nwere ike ịnye akụrụngwa dị mfe maka ngwaọrụ abụọ iji nyefee akụkụ nke ihe onwunwe ahụ, dịka ego ma ọ bụ data, site na iche iche azụmahịa na ntụkwasị obi nwere akara stampụ oge.
IBM emeela nyocha ebe a gwara ndị na-azụ ahịa na ndị ọkachamara ka ha nyochaa uru nke ngọngọ dị ka ikike kwụ ọtọ, nke ekwesighi, na teknụzụ ọha. O nwere ike ịbụ ihe dị mkpa nke nkwado nkwado dabere na IoT.
Echiche nke ndị ọkachamara
Otu n'ime ndị sonyere na nyocha ahụ, onye ndụmọdụ MIT Digital Currency Initiative, onye ọrụ Agentic Group Michael Casey kpọrọ blockchain ahụ "igwe eziokwu". Onye na-ahụ maka akụ na ụba na MIT na Prọfesọ Christian Catalini kwuru okwu mgbochi karịa, na-ekwu na ngọngọ ahụ na-enye ohere usoro okike nke ofntanetị nke Ihe iji belata ọrụ maka inyocha azụmahịa na iji netwọkụ.
Nke a metụtara ụdị azụmahịa niile, gụnyere ndị metụtara IoT. Ọzọkwa, ọkwa njikwa n'elu ngwaọrụ IoT ọ bụla nwere ike ịdị jụụ. Nchikota nke IoT na ngọngọ nwere ike iwelata ihe egwu nke mwakpo site n'aka ndị ohi.
Onye ọrụ Dell Jason Compton na-ahụta ngọngọ dịka "usoro ọzọ dị egwu" nke usoro nchekwa nchekwa nke IoT. Ọ na-atụ aro na idozi nsogbu nchekwa na netwọkụ IoT ga-abụ nsogbu siri ike karịa, dịka ọmụmaatụ, netwọkụ Bitcoin. Ngwakọta nke teknụzụ blockcheni na IoT nwere nnukwu ikike ị nwere ike ịchọrọ iji uru gị.
Blockchain abụghị naanị maka nchekwa
Ghọta ngọngọ na ihe kpatara eji ele ya anya dị oke mkpa dị ezigbo mkpa. Ọ bụ teknụzụ na-akpata bitcoin, mkpuchi ejiji na-ewu ewu. Na bitcoin, n’onwe ya, na-adọrọ mmasị mana ọ bụghị nnukwu ihe na-agbagha maka ụdị azụmahịa nke ụlọ ọrụ ego. Otu ihe ahụ abụghị eziokwu banyere teknụzụ n'azụ azụmahịa bitcoin
Ojiji nke teknụzụ ndekọ ederede maka ngwaọrụ IoT na-enye ohere ọ bụghị naanị idozi nsogbu nchekwa kamakwa ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ ma belata ụgwọ maka ọrụ ha. Blockchain bụ teknụzụ na-arụ ọrụ na azụmahịa ma na-enye mmekọrịta na netwọkụ. Ọ dị mma maka usoro nlekota na IoT.
Dịka ọmụmaatụ, na ndabere nke ngọngọ, ọ ga-ekwe omume ịkwado njirimara nke ngwaọrụ ma mee ka mmekọrịta dị n'etiti ha dị ngwa ngwa. Ngwakọta nke teknụzụ blockcheni na IoT nwere nnukwu ikike ị nwere ike ịchọrọ iji uru gị.
Zọ iji blockchain na ịntanetị nke ihe
N'ezie, ndị na-ere ahịa arụ ọrụ kemgbe ogologo oge iji wulite njikọ n'etiti ngwaọrụ na netwọkụ IoT dabere na ngọngọ. Enwere uzo 4 choro ha karia ndi ozo:
• mepụta gburugburu tụkwasịrị obi.
• Mbelata ego.
• Mee ngwangwa mgbanwe data.
• alinggba nchedo.
Teknụzụ ngọngọ nwere ike ịnye akụrụngwa dị mfe maka ngwaọrụ abụọ ka ị nwee ike ịnyefe akụkụ nke ihe onwunwe ahụ (ozi, ego) ozugbo na nchekwa.
Ihe atụ nke iji ngọngọ na netwọk IoT
Onye ọrụ mmepụta ihe nke Korea bụ Hyundai na-akwado mbido IoT nke nwere ngọngọ akpọrọ HDAC (Hyundai Digital Asset Currency). N'ime ụlọ ọrụ ahụ, a na-agbanwezi teknụzụ maka IoT.
Companylọ ọrụ ọhụụ Filament kwupụtara mmepe nke mgbawa maka ngwaọrụ IoT ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Nke a bụ iji nweta data dị mkpa enwere ike ịkekọrịta naanị n'etiti ngwaọrụ na teknụzụ blockchain.
N'ezie, ọtụtụ mmepe amalitela n'oge. Ọtụtụ nsogbu nchekwa edobeghị. Karịsịa, ọ dị mkpa ịrụpụta usoro iwu kwadoro maka ụdị ọhụụ a. Mana ọ bụrụ n ’iburu n’uche nke ahịa abụọ ahụ na - emepe, kedụ ikike mmekọrịta ha na-adị, anyị nwere ike ịtụ anya na IoT, nke etinyere n’ usoro ngọngọ ahụ, bụ okwu maka ọdịnihu dị nso. Ngwakọta nke teknụzụ blockcheni na IoT nwere nnukwu ikike ị nwere ike ịchọrọ iji uru gị. Kwesịrị izute ụlọ ọrụ mmepe ngwa iku ndi ochoro na blockchain. Ikwesiri itinye teknụzụ ndị a n'ime azụmahịa gị taa.
Tags: internet nke iheTechnology
SpotOn na Poynt: POS Integrated Marketing maka Obere Azụmaahịa